Warshad Gudbinta: Daahfurka oo Daaro Barnaamijka Suuqgeynta ee kuu gaarka ah | Martech Zone
Isniin, Maarso 22, 2021 Isniin, Maarso 22, 2021 Douglas Karr
Ganacsi kasta oo leh xayeysiis xaddidan iyo suuqgeyn suuqgeyn ah ayaa kuu sheegi doona in tixraacyadu yihiin marinka ugu faa'iidada badan ee ay ku helaan macaamiisha cusub. Waan jeclahay gudbinta maxaa yeelay meheradaha aan shaqeeyay way fahmayaan awooddeyda wayna ku aqoonsan karaan asxaabtooda inay u baahan yihiin caawinaad aan bixin karo. Ma aha in la xuso in qofka aniga ii tilmaamaya horayba loo aaminay talo soo jeedintooduna waxay leedahay tan miisaan ah Layaab ma leh in macaamiisha la soo gudbiyey ay si dhakhso leh u iibsadaan, wax badan ku qaataan, una gudbiyaan asxaabta kale
92% macaamiisha gudbinta kalsoonida dadka ay yaqaanaan.
Dadku waa 4x u badan tahay inay wax iibsadaan marka uu soo gudbiyo saaxiib.
Wareegyada gudbinta way awoodaa hoos u dhig qiimahaaga iibsasho kasta ilaa 34%
Dhibaatada, dabcan, waa sida loola socdo tixraacyadaas illaa loo beddelo. Adduunkeena internetka, tixraacyada waa lala socon karaa iyadoo la adeegsanayo xiriirin gaar ah. Lahaanshaha nidaam qaybiya xiriiriyeyaashaas oo raadraaca mid kasta oo ka mid ah tixraacyadaas.
Warshadda Gudbinta waa xayeysiis suuq-geyn gudbin ah oo shirkadaada siiya adeeg is-adeegsi, fudud, iyo xalka suuq-geynta gudbinta dhameystiran:
Ha ka welwelin inaad isqorto oo aad naqshadeyso oo aad dhisto dhisme kale. Warshadda Gudbinta wuxuu la yimaadaa boqollaal ka mid ah bogagga horay loo sii dejiyey, moobiillada degitaanka diyaarka ah ee gaarka ah ama ku dayanaya bogagga gudbinta ee noocyada la xaqiijiyay. Waad ku habeyn kartaa dhammaan sawirrada, astaamaha, nuqul, iyo abaalmarinnada mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinkaas.
Markaad gudbinta ololaha suuq geynta waa la dhisay, waxaad gacanta ku dari kartaa isticmaaleyaasha dashboardka, ama si dhakhso leh u adeegsadayaasha inay ku helaan xiriiriya gudbintooda siyaabo badan:
Iyada oo la adeegsanayo xiriiriyeyaal gaar ah oo loo qaybiyey gudbin kasta
Iyada oo loo marayo lambarka QR ee loogu talagalay gudbin kasta
Iyadoo loo marayo barnaamijka gudbinta ee ku jirta websaydhkaaga
Warbixintaada ku jirta Warshadda Gudbinta wuxuu awood kuu siinayaa inaad ilgaar ah ku hayso koritaanka barnaamijka gudbinta si aad markasta uga feejignaato cidda ku soo gudbisay ee kuugu sarreysa. Waad ka heli kartaa xogtaada muraayada dashboardka ama waxaad ku diri kartaa webhook - sidoo kale waxaad u dhoofin kartaa xogtaada waqti kasta oo ah faylka CSV.
Warshadda Gudbinta waxay hadda la midowdaa Hubspot oo wuxuu ku darayaa Salesforce, Intercom, Soo iibso, Iyo WooCommerce leh API oo dhowaan soo socda.
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa xiriirin gudbin ah oo ay dhistay Warshadda Gudbinta dhammaan qodobkan.
Tags: warshad gudbinbogga soo gudbinta tixraacaxiriirinta tixraacagudbinta gudbintamadal tixraacsoftware gudbinta